चीनमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ सय १७ पुग्यो – Halkhabar kura
२५ माघ २०७६, शनिबार ०८:५४
एजेन्सी । चीनमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ सय १७ पुगेको छ । चीन सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोरोनाका कारण चीनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ सय १७ पुगेको हो ।
यस्तै, ३१ हजार २ सय जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । अहिलेसम्म चीन बाहिर फिलिपिन्स र हङकङमा एकएक जनाको ज्यान गएको छ । चीन बाहिर २५ देशका २ सय ७० जनामा पनि कोरोना को संक्रमण भएको पाइएको छ ।
यसैबिच चीनको वुहानमा सबैभन्दा पहिला कोरोना भाइरसको चेतवानी दिने चिनियाँ चिकित्सकको मृत्यु भएपछि जनताहरु आक्रोशित बनेका छन् । बिरामीको उपचारकै क्रममा कोरोनाको संक्रमित भएका डा. लि वेनलियाङको बिहीबार मृत्यु भएको थियो ।
चिनियाँहरुले कोरोनाको पहिलो पहिचान गर्ने र चेतावनी दिने चिकित्सकको मृत्युपछि सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल विबोमार्फत् आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
वुहान केन्द्रीय अस्पतालका आँखा विशेषज्ञ डा. वेनलियाङले ३० डिसेम्बरमा जानकारी गराएको भएपनि स्थानीय प्रहरीले यसबारे नबोल्न र भ्रम नफैलाउन चेतावनी दिएको थियो । ३४ वर्षीया डाक्टर वेनलियाङलाई चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा केही दिनदेखि ‘हिरो’ का रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
हिजो डा. वेनलियाङको मृत्युले सरकारविरुद्धको चिनियाँ जनआक्रोश चर्किएको छ । उनीहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नहुँदा समयमै सूचना पुग्न नसकेको भन्दै विबोमार्फत् आक्रोश पोखेको बीबीसीले जनाएको छ ।
त्यहाँ अहिलेसम्म ६३७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ३१ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण फैलिएको छ । विश्वका विभिन्न २५ भन्दा बढी मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको बताइएको छ ।
Previous मौसमः काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा मौसम सामान्य बदली
Next दिल्ली विधानसभा चुनाव अन्तर्गत मतदान हुँदै